Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Dayot Upamecano Taariikhda Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Dayot Upamecano Taariikhda Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold ee LifeBogger
Cusboonaysiinta ugu dambeysay April 14, 2020
Soo dhowow!… Maqaalkeenu wuxuu bixinayaa daboolis buuxda oo ku saabsan Dayot Upamecano Taariikhda Carruurnimada, Taariikh nololeedka, Xaqiiqda Qoyska, Waalidka, Nolosha Hore, Nolosha Shakhsiyeed, Gabadh saaxiibtinimo, Hab nololeed iyo dhacdooyin kale oo caan ah laga soo bilaabo markii uu ahaa cunuggaas aadka u weyn ilaa markii uu caan noqday. Sawirka hoose waa Dayot Upamecano Noloshiisii ​​Hore iyo Kac.
Lee- Dayot Upamecano Nolosha Hore iyo Sawirka Sare. Dhibcaha: FBred, futview iyo FranceBleu.
Haa, aniga iyo anigu waxaan ogahay in Dayot uu yahay xayawaan difaac ah, oo dad badani u malaynayeen inuu yahay kan ku guuleysta Raphaël Varane.
Si kastaba ha noqotee, kaliya in yar oo ka mid ah kuwa jecel kubada cagta ayaa tixgeliyay akhriska Dayot Upamecano's Biography oo aan soo diyaarinay oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, bal aan marka hore ku siinno warkiisa, oo ay ku xigto Table of Content ka hor Full story.
Dayot Upamecano Taariikhda Carruurnimada:
Bilaabidda, magacyadiisa buuxa waa Dayotchanculle Oswald Upamecano naaneyskiisuna waa “Dayot". Daafaca ayaa ku dhashay 27-kii Oktoobar 1998 waalidkiis oo ku sugan Evreux, warmurtiyeed ku yaal waaxda Eure, gobolka Normandy, France.
Xaalad aadan aqoon, dhalashadiisa ayaa timid seddex bilood ka dib koobkii adduunka ee France 1998. Isla markii uu dhashay, waaliddiinta Dayot Upamecano waxay go'aansadeen inay isaga u magacaabaan “DayotchanculleSababta. Magiciisa waxaa loo bixiyay sida a 'iwm'(SoFoot Warbixin) waana magac uu awoowe u yahay awoowe.
Dayot Upamecano wuxuu u dhashay wiilkii ugu horreeyay waana suuragal, inuu noqdo cunugii labaad oo qoys ah oo lagu yaqaanay inay jecel yihiin kubbadda cagta. Wuxuu ku qaatay sanadihii hore horaantiisa isagoo si farxad leh u koray isagoo kaashanaya walaashiis ka weyn iyo walaalkiis cunugga oo uu u arko inuu yahay ku-xigeenkiisa.
Dayot Upamecano Qoyska asalkiisa:
Markaad u fiirsato muuqaalkiisa, waad igu raacsan tahay in daafaca uu u badan yahay in qoyskiisa ay ka fogaadaan France Sidaad u malaynaysid, Dayot Upamecano qoyskoodu waxay asal ahaan ka yimaadeen Afrika-si sax ah Guinea-Bissau.
Guinea-Bissau waa dal kuleyl ku yaal Xeebta Galbeedka Afrika ee Xeebta Atlanta, waana waddan loo yaqaan beero-xireeda qaran iyo duurjoogta. Eeg mid ka mid ah waalidiinta 'Dayot Upamecano' aabbihiis quruxsan, shaki la'aan, sharaxaa asalkiisii ​​Afrika.
Sawirka Aabaha Dayot Upamecano wuxuu kaa caawin lahaa inaad fahanto asalka qoyskiisa. Dhibcaha: Instagram
Ma ogeyd?… Dayot Upamecano waalidkiis (oo uu hogaaminayay aabihiis) waxay isaga u bixiyeen magaca "Dayotchanculle- - taasi run ahaantii, waa magac sharaf sharrafta loogu talagalay madaxa tuulada, jasiiradda Jeta Caoi kaas oo ah magaaladiisa hooyo ee Guinea-Bissau.
Dayot Upamecano Taariikhda Carruurnimada- Nolosha Hore:
Ku barbaarinta xaafadda Évreux ee Faransiiska waxay ahayd mid xiiso u leh Dayot da 'yarta ah. Goor hore, wuu noolaa oo ciyaaray kubada cagta (futsal ama shan-a-dhinac kubbadda cagta) subax ilaa habeen. Wuxuu taas ku sameeyay saaxiibkiisii ​​ugu wanaagsanaa oo aan ahayn ciyaartoy kale oo Faransiis ah- Ousmane Dembele. Isaga oo ka hadlaya khibradiisa carruurnimada, Dayot wuxuu yiri;
“Ousmane iyo kuwa kale, waxaan kubad ciyaareynay marwalba. Waxaan sidoo kale ciyaarnay futsal. Goor hore, Waxaan ka shaqeynay farsamadeena, gardarrada. Waxaan u ciyaarnay xad la'aan. Taasna wax badan ayay ina caawisay. ”
Dayot Upamecano markii uu yaraa, ma uusan aheyn midka ugu fiicnaa garoonka dhexdiisa. Maaddaama kubbaddu ay ahayd mid jecel qoysku, wiilka yari waxa uu nasiib u yeeshay in xubnaha qoyskiisa ay noqdaan la taliyayaal iyo caawiyayaal labadaba.
Dayot Upamecano aabihiis, tusaale ahaan, wuxuu ka dhigay inuu aad ugu shaqeeyo si uu u hubiyo in loo aqbalo akadeemiyada kubbadda cagta. Nasiib wanaagse, wuxuu bilaabay talaabadiisii ​​ugu horeysay ee kubada cagta isagoo Vaillante S. Angers (2004-2007) iyo FC De Prey (2008-2009).
Dayot Upamecano Taariikhda Carruurnimada- Nolosha Xannaano Hore
Sanadkii 2009 wuxuu u ahaa sanad wanaagsan caruurta kubada cagta xaafadiisa. Sannadkaas waxaa la arkay koox cusub oo akadeemiyadeed oo la odhan jirayNaadiga Kubadda Cagta ee Evreux 27Bilowga hawlgallada aan ka fogeyn gurigiisa qoyskiisa. Lucky Dayot iyo saaxiibkiis ugu fiican Ousmane Dembélé waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee ka qaybqaatay oo ku gudbay imtixaannada akadeemiyadda
Dayot, nolosha Evreux ma ahayn wax fudud markii hore. Cimrigiisu wuxuu ahaa cagihii dhulka markii ugu yaraa. Dayot wuxuu mar sheegtey inuu shaqeeyay in ka badan kuwa kale (badiyaa on habka solo-hab) intii uu halkaas ku ciyaarayay. Erayadiisa;
“Evreux, dhamaadka tababarka, wali waxaan aadayaa inaan kaliga kubado. Waxay ii shaqeysay waana furaha guusha.
Dayot Upamecano Biography- Wadada loo maro Sheekada:
Shaqada adag ee Evreux waxay bixisay ugu dambeyntii markii ay aragtay nasiib wanaag Dayot oo loogu yeerayo iskuul weyn. Wuxuu ka tagay Evreux (Heerka 5-aad ee nidaamka Horyaalka Kubadda Cagta Faransiiska) ilaa Valenciennes FC (heerka labaad ee nidaamka horyaalnimada kubada cagta Faransiiska).
Intii uu joogay kooxda Valenciennes FC, Dayot Upamecano wuxuu dareemay inaysan ahayn tan ugu fiican laakiin in lagu xanaaqo isaga ciyaar kasta. Mararka qaar waxaa loo sheegay inuu dhexda dhex ciyaaro, kaasoo si fiican u qabtay, xitaa goolal ayuu dhaliyay. Meel kasta oo uu tababaruhu ku meeleeyay, wuu ciyaaray, isaga oo leh xooggiisa iyo matalinimadiisa. Valenciennes runtii waxay u ahayd xusuusin aad u wanaagsan daafaca soo kacaya kaasoo lagu sawiray saaxiibkiis iyo saaxiibadiisa akadeemiga.
Wiilkii yaraa ee sawirqaaday (bidix) wuxuu ku raaxeystaa waqtigiisii ​​Valencia. Halkaan, waxaa lagu sawiray xarunta tababarka kooxda. Dhibcaha: FranceBleu
Isagoo jira da'da 16 xilliga xagaaga ee 2015, daafaca Faransiiska ayaa sameeyay go'aanka ugu muhiimsan noloshiisa. Wuxuu ka tagay qoyskiisii ​​iyo waddankiisii ​​oo dhan si uu uga baxo daaq cagaaran oo dibedda ah.
Dayot Upamecano waalidkiis waxay ansaxeen go'aanka wiilkooda uu ku aado kubbada cagta dibadiisa, si sax ah Austria. Thanks to bisaylkiisii ​​dhisay, way adkayd in laga tago guriga markay ahayd da'da shan iyo toban jir.
Wiilkii yaraa ayaa qaan gaadhay oo ku filnaaday inuu ka tago qoyskiisa iyo dalkiisii ​​markii uu ahaa 15 jir. Buundada: Gtalenti
Dayot wuxuu bilaabay nolol dibedda ah Liefering, oo ah naadiga heerka labaad ee Awstaraaliya ka hor inta aan loogu yeerin Red Bull Salzburg (kor ku sawiran). Red Bull Salzburg wuxuu ka dhigay nin qaan gaar ah, isaga oo ka caawiyay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay luuqadda. Erayadiisa;
“Waxaa jiray ajaaniib badan oo aniga oo kale ah. Waxay ahayd inaan barto luqadda. Barayaashu runti way fiicnaayeen.
Dayot Upamecano Biography- U kaca Fame:
Red Bull Salzburg, Dayot wuxuu ogaa xooga inuu yahay mid ka mid ah awoodaha aad u muhiim ah kubada cagta casriga ah. Tani waxay isaga ku kaliftay nidaamkii adkaa ee lagu dhisi lahaa xidhmadiisa Pack On Muscles. Waqtigii uu si aad ah u sugayay u wareegistiisa Jarmalka ee saldhigeedu yahay RB Leipzig, daafaca ayaa durba isku badalay a FOOTBALL GOLIATH.
Markii uu yaraa da'da 19, daafaca da'da yar ayaa mar hore noqday Goliath. Dhibcaha: Sportspuff
Mid ka mid ah astaamaha ay taageerayaashu ku farxeen ayaa ah habka uu u fidiyo lugihiisa cufan ee dheer si ay kubada u xadaan. Waxaa intaa sii dheer, cabirkiisa 6feet - 1 wuxuu eegaa dhererkiisa murqaha waa, shaki la'aan, waa caqabad ay adag tahay inay ka adkaato koox kasta. Sida hoos ku xusan, Difaaca Rocky waa awoodaa inuu ku guuleysto isku dhac kasta oo jirka ah iyo kubbadaha sare, isagu waa dhaqan ahaan aan loo dulqaadan karin.
Daafaca Rocky wuxuu awoodaa inuu xakameeyo isku dhac kasta oo jirka ah iyo kubad sare. Dhibcaha: IG
Hugely bedelay by Julian Nagelsmann, Dayot waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ballamihii ugu quruxda badnaa ee Faransiiska ee loo qaado booska difaaca dhexe kadib Raphel Varane iyo Aymeric Laporte. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Dayot Upamecano Nolosha Jacaylka- Single, Gabadh ama Naag?
Haa!… Daafaca dhagaxa weyn wuxuu keliya oo war u siiyaa qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee kubada cagta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira rabitaan aad u weyn oo ay taageerayaasha iyo saxaafaddu ku qabaan oo ku saabsan noloshiisa jacaylka. Sidaa awgeed su questionaasha ah Dayot Upamecano saaxiibtiis?… Miyuu leeyahay naag qarsoodi ah?… Ma jiraa WAG?
Waa kuma Dayot Upamecano Gabadha Gabadha ah- ma mid kaligiis ah, oo shukaansanaya ama guursaday Dhibcaha: Instagram.
Ka dib saacado baaritaanno deg-deg ah laga sameeyay shabakadda, waxaan u nimid xaqiijinta in Dayot Upamecano (wakhtiga qorista) wali xiriirkiisa lama uusan wada dhigin. Yaa garanaya?… waxaa laga yaabaa inuu haysto saaxiib gabar qarsoodi ah laakiin wuxuu go'aansaday inuusan ka dhigin baraha bulshada.
Waad ogtahay qaawinta xiriirka ka dhexeeyo marxaladaha hore ee shaqada waxay noqon kartaa qatar (burburka shaqada) oo aan la cafiyin kubbada cagta dhalinyarada. Laga yaabee, Dayot Upamecano waalidkiis iyo la taliyayaashooda inay kula taliyaan inuu nolosha jacaylkiisa ka dhigo mid sir ah.
Dayot Upamecano Nolosha Qofka:
Inaad ogaato xaqiiqdiisa nololeed ee ka baxsan shaqooyinka difaac ee garoonka ayaa hubaal ah inay kaa caawineyso inaad hesho sawir wanaagsan oo ku saabsan shaqsigiisa.
Bilowga, Dayot wuxuu leeyahay astaamo ah inuu aad u cayaaro. Si kastaba ha noqotee, markii uu garoonka galo isaga qudhiisa ayaa isku beddela, isagoo noqday mid aad u taxaddar badan bahal. He waa qof dareemaya inuu aad ugu qanacsan yahay waxa dabiiciga ah ee isaga la siinayo.
Dayot Upamecano Nolosha Shaqsiyadeed - Waa qof jecel jacaylka waxa dabiiciga ah ku deeqa. Dhibcaha: Instagram.
Sidoo kale noloshiisa shaqsiyeed, kubadsameeyuhu kuma weyna tattoos. Ugu dambeyntiina, waa nin karti badan, geesi ah, kalgacal leh, saaxiib run ah iyo hoggaamiye.
Dayot Upamecano Nolosha Qoyska:
Wadada stardom-ka kubada cagta ma noqon laheyd wax qurux badan sida ay tahay la'aanteed haddii aan laga helin xubnaha qoyska. Qeybtaan, waxaan kugu soo bandhigi doonaa xaqiiqooyin ku saabsan xubnaha qoyskiisa ee Dayot Upamecano oo ka bilaabaya waalidkiis.
Ku saabsan Dayot Upamecano Aabaha:
Ugu horreyn, Dayot aabihiis waa taayir (qof taayirro) xirfad ahaan iyo sidoo kale jaceyl kubada cagta ah. Waxaa lagu qiimeeyaa inuu kubad galiyay ciyaarta kubada cagta wiilkiisa. Dayot, waxba kama fiicna u safarka Guinea-Bissau si sax ah Ilha de Jeta (reerkiisii ​​hooyo) aabihiis si uu u arko awoowayaashiisa iyo xubnaha kale ee qaraabada ah.
La kulan Dayot Upamecano Aabihii oo ay weheliyaan wiilkiisa jecel fikradda ah inay booqdaan waddankooda Guinea-Bissau.
Ku saabsan Dayot Upamecano hooyadeed:
Marka ugu horreysa, Dayot hooyadeed waa timo-qurxiyaha xagga xirfadda. Tan waxaa la muujiyay markii daafaca uu la hadlay France-Bleu, idaacad maxalli ah oo ku taal Faransiiska. Si ka duwan kan Everton Tom Davies, Dayot kuma faani karo xirfadiisa hooyadeed - oo sidaas ku tusaysa muuqaalkiisa. Isagu uma imanayo inuu muujiyo timaha timaha ubbada gasha / timo xiitaa xitaa labada ciyaartoy ee hooyooyin yihiin timo-dhaqeyaal.
Ku saabsan Dayot Upamecano Walaalaha:
Inta aan ognahay, Upamecano wuxuu leeyahay laba walaalo ah; walaal weyn iyo walaal yar. Xiriirka uu u leeyahay walaalihiis waxay la mid yihiin habka uu naftiisa ugu geysto garoonka. Dayot ayaa mar shaaca ka qaaday akoonkiisa warbaahinta bulshada in walaalkiis ka yar (hoos ku sawiran) waa ku-xigeenkiisa. Isaga oo macnaheedu yahay, macnaheedu waa walaalkiis sidoo kale waa kubada cagta iyo difaacida sameynta.
La kulan Dayot Upamecano Walaalaha- walaasha weyn iyo walaal yar oo kubada cagta ah sameynta. Dhibcaha: Instagram
Xaqiiqada Nololeed ee Dayot Upamecano:
Iyada oo ay kujirto lacag gaadhaysa 2 Million Euro iyo Qiimo Suuqa oo kabadan 30 Million Euro, waa wax iska caadi ah in la dhaho Upamecano waa kubadyahan milyaneer ah. No halkan waa su'aal! - Muxuu daafaca ku qabtaa mushaharkiisa 50,813 euro oo uu qaato toddobaad gudihiis?… Qaybtani waxay ku tusaysaa dhammaan.
Bilaabidda, dka wada ciyaarida garoonka dhexdiisa iyo ka ciyaarista farxadda ma ahan doorasho adag oo loo qabto Upamecano. Daafaca ayaa jecel inuu ku qarash gareeyo boqolkiiba 50,813 isbuucii mushaharkiisa isagoo ku raaxeysanaya Duulimaadyada Safari ee Wadooyinka Arab Desert Safari waxay ku taala Dubai - United Arab Emirates.
Nolosha nololeed ee Dayot Upamecano- Xaqiiqdiina wuu ka buuxsamay waxyaabo run ahaantii u fiican. Dhibcaha: Instagram
Wuxuu ka fikiraa jahwareerka uu u qabo Raaxe Safari Rides, Dayot wuxuu kaloo jecel yahay inuu ku qarash gareeyo lacagaha adag ee uu kasbado isagoo ku raaxeysanaya doonida doonta inta lagu jiro fasaxa. Wuxuu doorbidi lahaa qaab nololeedkan halkii uu ku soo bandhigi lahaa gawaarida qalaad, guryaha waaweyn (guryaha waaweyn), iwm ee warbaahinta bulshada.
Dayot Upamecano Xaqiiqda Aan La Soo Sheegin:
Dadku way iloobaan xaqiiqooyinka, laakiin waxay xasuustaan ​​sheekooyinka carruurnimada. Qeybtaan taariikh nololeedka Dayot Upamecano, waxaan kugu soo bandhigi doonaa xoogaa aqoon dhab ah oo aadan waligaa aqoonin daafaca.
Xaqiiqada # 1Joojinta Mushaharkiisa:
Daafaca ayaa bishii Janaayo 2017 heshiis la saxiixday Red Bull Leipzig, kaasoo u arkay inuu heysto mushahar kordhin 2.5 Milyan Euros sanadkiiba. Mushaharka Dayot Upamecano wuxuu ku noqday tiro yar, waxaan leenahay dakhligiisa bishii, toddobaad, maalin, saacad, daqiiqad iyo ilbidhiqsiyo.
Dakhligiisa ee € (Euros)
Dakhligiisa ee Pound (£)
Daqligiisa ee Doolarka ($)
Waxa Uu Helaa Sanadkii € 2,500,000 £ 2,201,505.6 $ 2,701,247.37
Waxa Uu Shaqeysto Bishiiba € 208,333.3 £ 183,458.8 $ 225,103.9
Waxa Uu Helaa Isbuucii € 48,449.5 £ 42,664.8 $ 52,349.75
Waxa Uu Helo Maalintii € 6,921.36 £ 6,094.97 $ 7,478.54
Waxa Uu Helaa Saacaddiiba € 288.39 £ 253.95 $ 311.6
Waxa Uu Helaa Hal Daqiiqo € 4.81 £ 4.23 $ 5.19
Waxa Uu Keena Sekhadkiiba € 0.08 £ 0.07 $ 0.09
Tani waa waxa DAYOT UPAMECANO kasbaday tan iyo markii aad bilowday daawashada Boggan.
Haddii waxa aad kor ku aragto ay akhriyaan (0), waxay ka dhigan tahay inaad fiirineysid bog AMP ah. Hadda cleefid HALKAN si loo arko mushaarkiisa oo kordhiyay ilbidhiqsiyo.
Ma ogeyd?… Celcelis ahaan ninka Jarmalka jooga ee dakhligiisa ku soo gala € 3,770 bil waxay u baahan tahay inay shaqeyso ugu yaraan 4.6 sano si loo kasbado € 208,333. Tani waa qadarka Dayot uu bilaabay inuu kasbado (bil gudaheed) markii uu u saxiixay Red Bull Leipzig.
Xaqiiqada # 2: Muxuu qiimayntiisa FIFA dhahaysa:
Ciyaartoyda mustaqbal wanaagsan leh had iyo jeer waxaa dalban kara Kuwa jecel jaceylka FIFA mar alla markii FIFA cusub la soo daayo. Dayot Upamecano Xogta FIFA ayaa shaaca ka qaaday inuu ka mid yahay kuwa rajo weyn ka qaba. Yaa garanaya?… wuxuu xitaa noqon karaa daafaca ugu fiican adduunka mustaqbalka.
Xawaaraha FIFA ee Dayot wuxuu muujiyey rajo aad u weyn- Wuxuu hubiyaa inuu leeyahay awood uu ku noqon karo daafaca ugu fiican adduunka. Dhibcaha: soFIFA.
Xaqiiqada # 3: Kumaa ahaa Idol intuu koray?
Markii uu ahaa ilmo, Dayot wuxuu eegay kooxda France halkaas oo uu ku leeyahay ku dayasho wanaagsan. Hal qof oo gaar ah ayaa ka dhex muuqda tusaalayaasha doorkan. Ma ahan difaac isaga la mid ah, laakiin ma jiro halyeeyada kale Zinedine Zidane. Ma ogeyd?… waxay ahayd jacaylka Zizou taas ayaa ka dhigtay inuu u ciyaaro sidii qadka dhexe intii uu yaraa.
Xaqiiqada # 4: Waa maxay diinta Dayot Upamecano?
Waxaan haynaa caddeyn ah in waaliddiinta Dayot Upamecano ay suuragal tahay inay isaga ku kaceen iyagoo u hoggaansamaya diinta masiixiga ee diinta masiixiga. Kubbad sameeyuhu waa weyn yahay oo kama xishoodo diintiisa. Wuxuu xidhan yahay qoorta oo aan lahayn astaamaha iskutallaabta, oo ah muujinta tilmaamaysa inuu yahay Katoolik.
Fariin ku saabsan Diimaha Dayot Upamecano. Dhibcaha: IG
Si kastaba ha noqotee, ciyaar kasta, Dayot wuxuu leeyahay caado caadi ah oo odhanaya- "Mahadsanid Eebbow.
Hantida FACT: Thanks for reading our Dayot Upamecano Sheekada Carruurnimada Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qornayn. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Xusuus-qorka Kubadda Cagta RB Leipzig
Taariikhda wax laga beddelay: 31-ka Meey, 2020